Karusiyamu Boride Upfu, CaB6 - Goodao Technology Co., Ltd.
Molecular fomula Cab6
CAS Nhamba 12007-99-7
Kuwandisa 2. 33g / cm3
Nzvimbo yakanyunguduka 2230'C
Zvishandiso 1, yeBaiyun kabhoni uye magnesium chena machena kabhoni inoratidzira anti-oxidationanti-kukanganiswa
3, yenyukireya indasitiri anti-neutron yezvinhu zvitsva
4, inoshandiswa senge tembiricha nyowani ye900K inotenderera zvigadzirwa zvemagetsi mune semiconductor nyowani
5, yekugadzira boron trichloride (BC3) uye amophous boron mbishi zvigadzirwa
6, yekugadzira yakachena simbi borides (B2, ZB2 HB2, nezvimwewo J uye yakakwira purty boronalloy (ni-b, CO-B, CU-B, nezvimwe.
7, inoshandiswa kugadzira catalyst ine calcium-boron nitride (CA3B2N4) uye hexagonboron nide musanganiswa nekunaka kwazvo kuita kwekristalline cubic boron nitd8, inoshandiswa se boron alloy cast iron desulfuzation deoxidation boron kuwedzera agen9 inoshandiswa seboron simbi desulfunzation deoxo boron simbi yekuyera deoxidizer
Chimiro chakajairika chemakemikari ehexboron ndeyeCsCl chimiro. Musiyano ndewekuti B6 octahedron inotora nzvimbo yeCs. Nekuda kwechisimba chakasimba covalent pakati peBB, ine hunhu hwenzvimbo yekunyungudika uye kuomarara kwakanyanya Masimba ayo epanyama uye emakemikari akanyatsogadzikana, mumhepo kukarukureta, CaB6 yegumi-micron giredhi ichaonekwa mushure me800 degrees Celsius kupisa kuwedzera, isiri nyore ku oxidation, CaB6 inowanzo nyungudika muhydrochloric acid uye sulfuric acid, saka nehunyanzvi kubvisa marara ne hydrochloric acid, asi CaB6 inosungunuka mu nitric aci.
Panyama uye kemikari index yekugadzirisa
1. Calcium hexaboride yakasviba pfumbu pfumbu kana chidimbu. Melting point 2230 ℃, hama density 2.33g / cm, isingasviki mumvura pa15 ℃ tembiricha yemukati.
2. Silicon boride igirazi rinopenya dema-grey rine huremu hwehukama hwe3.0g / cm uye nzvimbo inonyungudika ye2200 ℃. Kugaya kwaro kushanda kwakakwirira kupfuura uko kwe boron carbide uye silicon carbide. Iyo ine yakasimba simba uye kugadzikana kunyanya pasi pekupisa kwekushisa.
Chinangwa chikuru mupepeti
1. Inoshandiswa seye boron inowedzera yeiyo oxidation kuramba, kusagadzikana kwekuputika uye simba remafuta rinosimudzira re dolomite uye magnesia dolomite Refractories.
2. Inoshandiswa se deoxidizing degassing mumiririri wepamusoro conductive mhangura yekuvandudza kuitisa uye simba.
3. Inoshandiswa senge nyowani nyowani yekuongorora zvinhu mu nyukireya indasitiri.
4. Zvitsva semiconductor zvinhu zvinoshandiswa mumisangano yepintronic ine tembiricha ye 900K.
5. Inoshandiswa se boron alloy cast iron desulfurization uye deoxidization boron-inowedzera mumiririri.
6. Inoshandiswa sechinhu chinoparadza, deoxidizing uye boron-ichiwedzera mumiririri wesimbi boron.
7. Inoshandiswa se deoxidizer yesimbi simbi.
Pashure: Molybdenum Boride Upfu, MoB2
Zvadaro: Aluminium Boride Upfu, AlB2
Karusiyamu boride upfu
Karusiyamu boride upfu Mafekitori
Karusiyamu boride upfu Fekitori
Karusiyamu boride upfu Mugadziri
Karusiyamu boride upfu Vagadziri
Karusiyamu boride upfu Mutengo